Masinina oksizenina mpitaona oksizenina 3L tsara indrindra ho an'ny milina fanentanana oksizenina be zotom-poitra OZ-3-01NWO Mpanamboatra sy ozinina | FuluoEr
Masinina ôksizenina mpitazona oksizenina 3L ao an-tokantrano ho an'ny milina fanentanana oksizena avo lenta ho an'ny be antitra OZ-3-01NWO
OZ-3-01NWO dia mpamokatra ôksizena grady 3L, milanja 13kgZ eo ho eo, famatsiana oksizenina matihanina, ôksizena mandritra ny fiainana.
OZ-3-01NWO dia manana fiasa 10 azo ampiharina, famokarana oksizenina grady 3L famokarana oksizenina mamirapiratra, efijery lehibe misy famaritana avo lenta, fiasan'ny fotoana, fiasan'ny atomika, fanairana tsy manara-penitra, fampielezana feo, famolavolana feo fampihenana, fanamasinana 7 sosona, 48 ora Miasa sns., Hanomezana fahafaham-po ny filan'ny fianakaviana isan-karazany.
OZ-3-01NWO dia nahatratra ny fenitra ara-pitsaboana nasionaly, ary mila fanitsiana fotsiny ny tahan'ny fikorianana, afaka mifanaraka amin'ny karazan'olona rehetra izy io, ary milamina kokoa ny fifohana rivotra.
OZ-3-01NWO dia manana efijery lehibe famaritana avo lenta, afaka jerenao mora foana ny seho fampiasa amin'ny efijery iray manontolo rehefa hipetraka na mandry ianao, lehibe sy mazava ny isa, tsy matahotra presbyopia, ary azo ampiasaina ao anaty tontolo maizina. Ho fanampin'izany, ny mikrônan'ny OZ-3-01NWO Ny fiasan'ny atomika mandroso dia tena azo ampiharina ihany koa, ary mety ho azo ampiharina amin'ny sery sy kohaka, izay afaka manampy anao hanavotra atomika.
OZ-3-01NWO dia mampiasa teknolojia alemanina sy compresseur tsy misy menaka varahina madio, izay tsy mitsitsy ihany ny herinaratra, fa manome hery matanjaka ary miasa tsara mandritra ny 48 ora.
OZ-3-01NWO dia nandalo ny fanamarinana kalitao avo lenta CE / FDA. Izy io dia mpamokatra oksizenina ao an-trano miaraka amina asany matanjaka be.
Teo aloha: 5L Medical Oxygen Concentrator SD-05W —— Fampisehoana oksizenina amin'ny fotoana tena izy, hita ny vokatry ny fitsaboana oksizenina
Manaraka: Wrist Electronic sphygmomanometer [Modely isa: KP-7190]
Mpandrindra oksizenina mikoriana avo
Mpandrindra oksizenina 10 Lpm
Mpandrindra Oksizenina kely
5L Mpifantoka Oksizena Ara-pitsaboana SD-05W —— Tena ...